November 27, 2020 Xuseen 7
Ra’isul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa xafiiskiisa ku qaabilay madaxweynihii hore ee Liberia Ellen Johnson-Sirleaf, madaxweynihii hore ee Mozambique Joaquim Chissano, iyo madaxweynihii hore ee South Africa Kgalema Motlanthe – ergayga gaarka ah ee xalinta dagaalka ka socda Itoobiya Cyril Ramaphosa, madaxweynaha South Africa ahna gudoomiyaha Midowga Afrika.
Abiy Axmed wuxuu mahadnaq balaaran ujeediyey gudoomiyaha midowga africa, madaxweyne Cyril Ramaphosa walaacii iyo isfahamkii ugu weynaa ee lawadaagay dadaalada Ethiopia ee loogu jiro isla xisaabtanka iyo in sharciga lahorkeeno TPLF
Dhanka kalena, hoggaanka sare ee maamulka Tigray ayaa sheegay inay soo magacabeen xubno matali doono oo Midowga Afrika iyo beesha caalamka kala hadli doono sidii xabad joojin looga dhawaaqi lahaa gobolka xilli halkaas uu ku dhexmaray dagaal u dhexeeyo ciidamada Itoobiya iyo kuwa Tigray.
Bayaan kasoo maamulka Tigray ayaaa ugu baaqay in la furo marrinada gargaarka lagu gaarsiinayo shacabka isla markaana la sameeyo baaritaano madaxbanaan oo ku saabsan eedeymaha ah in dambiyo dagaal laga geystay gobolka.
Aad ayaan uga damqadaa markii aan arko sawirrada labada gaal ee dhagarqabeyaasha ah iyo doqonka Qaddarta Alle ku fariisisay kursiga ugu sarreeya Somalia. Qalbifurnaanta, dhoollacaddeynta, iyo salaantaas ma aha mid Farmaajo ku matalo amase igmasho (mandate) uga haysto ummadda Soomaaliyeed; waa mid damaciisa iyo dantiisa shakhsiga ah keliya ku salaysan.
Dad baa difaacaya amase wanaag ka sugaya ninka argagixiso u aqoonsaday dad Soomaaliyeed boqol sano ka badan halgan xornimodoon kula jirey Xabasha. Jaalle Siyaad haddii uu maqli kari lahaa, godka ayuu ku rafan lahaa. Soomaali baa hore u tiri: meel aar ka kacay, atoor ( labka sagaarada) ka boodbood.
Wada hadal maa la bilaabaa?!
Ninkaan Abiy waa riyooday. Waxa uu ku riyooday in uu BOQOR noqonaayo sida laga soo weriyey. Waxa kale oo l siiyey bilad sharaf qaali ah. Marka, sida muuqataa, labadiiba TPLF baa luuq ka gelisay. Feedback waxa uu ku khasbanyahay in uu ku ag BAKHTIYO iyagana BAKHTIIYO oo uusan mush ka reebin inta karaankiisa ah.
Marka, dadka u dhuundaloolaa waxa ay leeyihiin wax wadahadal la yiraahdo ma jirtee MAATO DOOX iyo ISIR SAFAYN baa taagan.
Kamau/Tesfaye, ma Farmaajo FOOBIYIHII baadan maanta daawo u qaadan?!
“OGAADEENKU waa LAAJIYIIN” sidaas waxaa laga hayaa Mr. FAROOLE. Waxba yaan marka lagu rafan Farmaajo, ciddii shirqoolka ka danbaysay waa la wada ogyahaye. Haddaanse ku xasuusiyo, waxa laga hadlayaa waa ITOOBIYA xaaladdeeda ee Farmaajo lagama hadlayn.
Itoobiya — Alle ha isku jabiyee — in laga hadlayo yaa xusuusinteeda kaaga baahan? Ahbalka Xabashada u sixran bay aniga iga haysaa.
Faroole waa shakhsi, mana aha madaxweyne qaran Soomaaliyeed laakiin Farmaajo wuxuu sitaa darajada Madaxweyne Soomaaliyeed. Taariikhda lama hayo masuul Soomaali ah oo sidii ciyaal iskuul saaxiib ah kursi kula fariistay amase diyaarad la raacay Madaxweyne Xabashi.
Xusuuso in Madaxweyne C/Rashiid Cali Sharmaarke u jaray xiriirkii diblomaasiga dowladda Ingiriiska markuu ahaa ra’iisalwasaaraha 1963 arrinka NFD awgiis, mana soo celin xiriirkii markii uu madaxweyne noqday. Waxaa soo celiyey Maxamed Siyaad markuu xukunka qabsaday.
Farmaajo waa sinjidhaan; wuxuu wasakheeyey taariikhda Mareexaan, tan Daarood, iyo tan Soomaaliyeed.
Kkkkkkkkkkk marka geel loo heeso ayeey goroyo u heestaa, maxaa meesha keenay faroole, waxaa laga hadlayaa doqonkaan kan farmaajo ah ee riyada ku arkay in itoobiyaan xun ku hayn karto xukunka, waa neef aan waxbo ka aqoon marxaladihii ay soomartay dawlad dhiska soomaaliya, waxaan xasuustaa sheekadii saddexdii maan laawe oo ahayd:
1 gabar qurux badan oo ninkii guursaday uu ka bixiyey 100 halaad oo uu xoolo ka lahaa iyo baarqabkii. Ninkii oo gaajo iyo darximo la liito isagii xaaskiisii uu boqolka halaad ka bixiyey ayaa markale xoolo u soo doontay ninkii uu boqolka ka qaatay ee gabadhiida qabay gaajo iyo silicna meel la jiifa, gabadhii markii aabbaheed u soo hoyday laakiin aysan u hayn waxay siiso ayeey u tagtay nin Ugaarsade ah oo ay ku tiri walaaloow aabbahay ayaa ii jooga waxaan siiyana ma hayee hal xabbo oo sagaaro ah uu soo qabo si aan ugu quudiyo caawo Lacagteeda dib aan kaa siiyee, ugaarsadihii wuxuu yiri xabbadda sagaarada ah iiga beddelo Inaan caawo kula…….. Kkkkkkkkkk ugaarsadihii wuu u keenay gabadhii xabbaddii sagaarada ahayd weyna ballamisay, markii uu ugaarsadihii yimid waxay ku tiri nimankaas halkaas fadhiya la fariiso kkkkkkkkkk markii ay hubsatay ineey wada joogaan aabbaheed, ninkeedii iyo ugaarsadihii waxay soo dhex dhigay hilibkii sagaarada oo ay soo karisay kkkkkk weyna la wada hadashay dhammaantood iyadoo ku dul akhrisay haddallo xigmad leh, waxayna tiri
2 ninksyga waa maan laawe waayo boqol halaad iyo baarqabkii lagu arkey ayuu naag ka bixiyey caawana waa cayr aan waxba haysan uu cuno, aabbahay waa maan laawe ninkii uu ka qaatay boqolkii neef ee lagu arkay ayuu xoolo kale u soo doontay, ugaarsadahana waa maan laawe oo gabar boqol halaad iyo baarqab laga bixiyey ayuu rabaa inuu xabbad sagaara ah ku helo kkkkkkkkk.
Haddaba farmaajo waa maanlaawe waayo kursiga villa soomaaliya yaallo saddex milyan oo qof oo soomaaliyed ayaa u dhimatay si loofariisto, dhib farabadan oo loo soomaray muddo soddon sano ka dib in afartiisanaba doorasho xal loo arkay in la galo haddaba maanlaawe farmaajo kursigaas qabuuraha dhexyaallo oo dhiiggu ka daadanayo ayuu rabaa inuu sidii adeerkiis siyaad barre 21 sano ka dhex doobiyo kkkkkkk maanlaawe aqali laawe ABIY Axmedna la mid, aseeyas afaweerkina waa shayddaanka maanlaawaha ah ee kula taliyey ineey saddexdoodaba isku mar ku dhawaaqaan ineey boqorro yihiin kkkkkk oo saddex maanlaawe oo boqor nimo ku riyooday.
A.arar, haddaad dib u jalleecdo taariikhda NFD. Waxaa gobolkaa MoU ku bixisay dawladdii uu Cabdirashiid ka ahaa madaxweynaha Cigaalna ra’iisal wasaaraha. Waxa uu heshiiskaasi ka dhacay Arusha, Taanzania, 23 Oktoobar 1967! Waxaana la yiraahdaa dilkiisu waxa uu sababsaday arrinkaa. Marka isma qabanayso.
Dhinaca kale, dawladdii uu wiilkiisu ra’iisal wasaaraha ka ahaa, waxa ay rabtay in BADDII Soomaaliyeedna Kenya lagu siiyo MoU, hadduusan alle baarlamaan u soo dirin. Taariikhdu waa qoran tahay boowe.
Haddaanse ku soo dhowaado, anigu taageere uma ihi Farmaajo iyo dawlkaddiisa, dhawr jeerna waan ka hadlay waxyaabaha aan ka filayey ee ay ka gaabisay, laakiin wax isaga dhaamna oo aan ku beddesho saaxada siyaasadda Soomaaliya illaa hadda iigama muuqdaan. Bal cidda dhaanta nimankii Jazeera ku shiray ee aan ku daba tukanno bal adigu noo sheeg?
Wuxuu haysta shahaadada Nabad,
Tan Dagaalkana hadda ayaa looga fadhiya qolyihii tii hore gudoonsiiyay in ay tan Dagaal oognimadana ula soo deg degaan .
Nabad iyo Nolol waxay siiyeen Shahaadada qaran soo celinta,
Hadda waa in ay ula soo deg degaan mida qaran burburiska
DAAWO-Haweenka Garoowe ku dhawaaqay inay hubka qaadanayaan kuna biirayaan dagaalka Alshabab.
SAWIRRO-Ciidamo katirsan kuwa difaaca Puntland oo gaarey Buuraleeyda Galgala.
M/weyne Deni,”Baaritaan ayaa ku socda cidkasta oo sahashey weerarkii xabsiga Boosaaso”.
Sawirro: Guddoomiyaha barlamaanka Puntland oo si deg deg ah u gaarey Badhan & sababta.
DAAWO: Puntland oo ku dhawaaqday dagaal Alshabaab looga saarayo buuraleeyda Cal-madaw.
Joe Biden oo ku dhawaaqay go’aamo walaac xoogan ku abuuray saraakiisha Soomaalida
Ra’iisul Wasaare Rooble oo afka furtay markalena farriin u diray midowga musharixiinta.
Ciidanka Kenya oo qabsaday magaalooyin katirsan gobolka Gedo xirayna garoonkii diyaaraddaha.
Saraakiishii ciidanka dowladda Soomaaliya oo gudaha u galay Kismaayo lana kulmay hoggaanka Jubbaland
XOG: Villa Somalia oo dabin u maleegtey mucaaradka iyo shaqsiyaad xabsiga loo taxaabayo.